Iindaba - Zitshintsha nini iimbiza zezityalo Utshintsha njani iimbiza?
Zitshintsha nini iimbiza? Utshintsha njani iimbiza?
Ukuba izityalo azitshintshi iimbiza, ukukhula kweengcambu kuya kuncitshiswa, okuya kuchaphazela ukukhula kwezityalo. Ukongeza, umhlaba embizeni uya usilela kwizakhamzimba kunye nokuhla komgangatho ngexesha lokukhula kwesityalo. Ke ngoko, ukutshintsha imbiza ngexesha elifanelekileyo kunokwenza ukuba iphinde ivuseleleke.
Ziza kubuyiselwa nini izityalo?
1. Jonga iingcambu zezityalo. Ukuba iingcambu zinwenwela ngaphandle kwembiza, oko kuthetha ukuba imbiza incinci kakhulu.
2. Qaphela amagqabi esityalo. Ukuba amagqabi aya esiba made kwaye amancinci, ubukhulu bawo buya buncipha, umbala uya ukhanya ngokulula, oko kuthetha ukuba umhlaba awunazondlo zaneleyo, kwaye umhlaba kufuneka ubekwe ngembiza.
Uyikhetha njani imbiza?
Ungabhekisa kwinqanaba lokukhula kwesityalo, esikwi-5 ~ 10 cm enkulu kunobungakanani bembiza yokuqala.
Ungaziphindisa njani izityalo?
Izinto kunye nezixhobo: iimbiza zeentyatyambo, umhlaba wenkcubeko, ilitye leeperile, ishedyuli yegadi, umhlakulo, ivermiculite.
1. Thatha izityalo embizeni, ucofe ubunzima bomhlaba oseengcanjeni ngezandla zakho ukuze uwukhulule umhlaba, emva koko ulungelelanise iingcambu emhlabeni.
2. Chonga ubude beengcambu ezigciniweyo ngokobungakanani besityalo. Ukuba sikhulu isityalo, kokukhona iingcambu zigcinwa ixesha elide. Ngokubanzi, iingcambu zeentyatyambo zengca zifuna kuphela malunga ne-15 cm ubude, kwaye iinxalenye ezingaphezulu ziyanqunyulwa.
3. Ukwenzela ukuthathela ingqalelo ukugqobhoza komoya nokugcinwa kwamanzi komhlaba omtsha, ivermiculite, ipearlite, nenkcubeko yomhlaba ingaxutywa ngokufanayo kumlinganiselo we-1: 1: 3 njengomhlaba wembiza omtsha.
4. Yongeza umhlaba oxubekileyo malunga ne-1/3 yokuphakama kwembiza entsha, uyihlanganise ngezandla zakho, ubeke izityalo, emva koko wongeze umhlaba de ube u-80% ugcwele.
Ungazikhathalela njani izityalo emva kokutshintsha iimbiza?
1. Izityalo ezisandula ukubekwa endaweni yazo azikulungelanga ukukhanya kwelanga. Kuyacetyiswa ukuba uzibeke phantsi kwe-eaves okanye kwi-balcony apho kukho ukukhanya kodwa kungekho kukhanya kwelanga, malunga neentsuku ezili-10 ukuya kwezi-14.
2. Musa ukuchumisa izityalo ezisandula ukuphinda ziphindwe. Kuyacetyiswa ukuchumisa kwiintsuku ezili-10 emva kokutshintsha imbiza. Xa ufaka isichumiso, thatha inani elincinci lesichumiso seentyatyambo ulifefe ngokulinganayo emhlabeni.
Thena izithole zonyaka
Intwasahlobo lixesha elifanelekileyo lokuba izityalo zitshintshe iimbiza kunye nokuthena, ngaphandle kwezo zihluma. Xa uthenwa, isiko kufuneka libe malunga ne-1 cm kude nepetiole esezantsi. Isikhumbuzi esikhethekileyo: Ukuba ufuna ukuphucula inqanaba lokusinda, ungadipha incindi yokukhula kwengcambu emlonyeni wokusika.